डा.केसीको अनसनमा नयाँ किर्तिमान, तर सरकार इतिहासकै गैरजिम्मेवार ! - डा.केसीको अनसनमा नयाँ किर्तिमान, तर सरकार इतिहासकै गैरजिम्मेवार !
डा.केसीको अनसनमा नयाँ किर्तिमान, तर सरकार इतिहासकै गैरजिम्मेवार !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ८ श्रावण, 02:05:50 AM
काठमाडौं । डा.गोविन्द केसीले १५ औँ अनसन थालेको आज २५ दिन पुगेको छ । यसअघिका अनसनमा उहाँ २४ दिनसम्म अनसन बस्नु भएको थियो । जुम्लाबाट गत असार १६ गते अनसन शुरु गरेका केसीले काठमाडौं आएर पनि निरन्तरता दिँदा उनको जीवनकै लामो अनसन भएको हो । संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै डा.केसीले जुम्लाबाट अनसन शुरु गरेका थिए ।
तर अनसनको २५ औँ दिन पनि सरकारले माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस वार्ता र पहल गरेको छैन । यसअघि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार नै अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्नुपर्ने, माफिया अनुकुलका बुँदा विधेयकबाट हटाउनुपर्ने, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीसम्मको पठनपाठन हुनुपर्ने, विकट जुम्लालाई उपचार केन्द्र बनाउनुपर्ने लगायतका माग डा.केसीका छन ।
तर सरकारले कुनै हालतमा माफिया अनुकुलको विधेयक संसदबाट फिर्ता नलिने अडान लिएपछि डा.केसीको अनसन लम्बिएको मात्रै छैन, स्वास्थ्य अवस्था पनि गम्भिर बन्दै गएको छ ।
केसीको अन्तिम ढुकढुकी बाँकी
माग सम्बोधनमा सरकार उदासिन हुँदै गएपनि डा.केसीको मुटुको ढुकढुकी अन्तिम अवस्थामा पुगेको डाक्टरहरुले बताएका छन । कुनै पनि बेला उनको मुटुको चाल रोकिन सक्ने र अवस्था खतरापूर्ण हुने डा.केसीको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरुको भनाई छ ।
सेता रक्तकोषको संख्या घटेपछि उहाँको शरीरमा इन्फेक्सन देखिदै आएको छ । जसलाई केसीलाई उपचार गर्नै दिएका छैनन ।
इतिहासकै गैर जिम्मेवार सरकार
डा.केसी यसअघि अनसन बस्ने वित्तिकै हरेक सरकार गम्भिर बन्थे । र सकेसम्म चाँडै माग सम्बोधन गरेर डा.केसीलाई अनसन तोडाउन लाग्थे । तर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भने डा.केसीका मागमा गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था जटिल अवस्थामा पुगेपनि ओली सरकारले उल्टै अनसन तोडेर बार्तामा आउन जस्ता गैरजिम्मेवार तर्क गर्दै आएको छ । यता नागरिक समाजले आन्दोलन चर्काउँदै गएपनि त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
पुर्व एमालेनिकट मनमोहन मेडिकल कलेज र माओवादी निकट झापाको बिएण्डसी कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सरकारले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गरेको छ । यसअलावा अहिले सत्तारुढ दलका अरु मेडिकल कलेज पनि छन ।
पुर्वाधार र आवश्यक मापदण्ड नपुगिकनै सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने योजनाका साथ विधेयक पास गर्ने तयारी गरेपछि डा.केसीले अनसन शुरु गरेका हुन ।
तर सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर पनि माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल गरेको छैन । शिक्षासचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा गठन गरिएको वार्ता समितिले गत हप्ता तीन पटक वार्ता गरेपनि डा.केसीसँग सहमति हुन सकेको थिएन ।
२०७५, ८ श्रावण, 02:05:50 AM